Nanambara ireo mpandresy ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany ho an'ny trano fidiovana 2018
Home » Lahatsoratra farany farany » Fizahan-tany azo idirana » Nanambara ireo mpandresy ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany ho an'ny trano fidiovana 2018
Fizahan-tany azo idirana • Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Brezila • Vaovao • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Toiasety enina malaza amin'ny mpizahatany eran'izao tontolo izao no satro-boninahitra tamin'ny fomba ofisialy ary miakatra amin'ny seza fiandrianany ho an'ny taona 2018 amin'ny Toilet Tourism Awards. Ny mpandresy dia misy lohan-tsofina ao amin'i James Bond eo an-tampon'ny tendrombohitra, trano fidiovana izay ahatsapanao fa any anaty ala ianao, ary seranam-piaramanidina ahafahan'ny alika mpitari-tafika miangona ao anaty trano mampionona
Toeram-pivoahana enina amin'ny toeran'ireo fizahantany eran'izao tontolo izao no nandrombaka amboara nandrombaka tamin'ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany amin'ny Toilet 2018. Ny fandefasana dia voaray avy amin'ny toerana fizahan-tany manerana an'i Amerika Avaratra, Eropa, Azia ary Aostralia. Ny trano fidiovana dia notsaraina noho ny endrik'izy ireo, ny quirkiness, ny toerana misy azy, ny fidirana ho azy ary ny anjara birikiny ara-toekarena amin'ny toerana misy azy ireo.
Ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia tamin'ny taona faharoa, noforonin'ny MyTravelResearch.com, izay mikendry ny hampiseho ny fifandraisana akaiky eo amin'ny trano fidiovana vaovao sy madio misy famolavolana lehibe sy toekarena fizahan-tany mahomby eo an-toerana - ny vokany.
Ny trano fidiovana fizahan-tany mandresy manerana an'izao tontolo izao amin'ireo sokajy enina nambara androany dia:
Drafitra tsara indrindra - The Saskatchewan Science Center, Regina, Saskatchewan, Canada. Ny famolavolana ny trano fidiovana rihana faha-2 izay nohavaozina dia notsindrian'ny ala ala any amin'ny faritra avaratry Saskatchewan. Misy sary mifandraika amin'ny valindrihana ao anaty ala lalina sy feo momba ny feon'ny vorona sy ala. Ny takelaka rindrina iray manontolo dia rakotra sary miroboka ao anaty ala any Kanada izay milamina avy amin'ilay mpaka sary nahazo loka Todd Mintz.
Fanehoan-kevitry ny mpitsara: Tamin'ny fitsarana ity trano fidiovana ity dia avo lenta ny famolavolana sary. Ny loo dia traikefa feno immersive amin'ny fahitana sy ny feo. Ny trano fidiovana ao anatin'ny foibe siantifika dia toy ny miditra amin'ny tontolo hafa ahafahanao manao ny asanao eo afovoan'ny fahitana sy ny feo voajanahary - tsy mila manahy momba ny orsa ianao. Amin'ny ankapobeny, tena nandinika tsara.
Mpandray anjara ara-toekarena tsara indrindra - The Cummins Mosaic Loo, Cummins, Eyre Peninsula, South Australia, Australia. Ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia nanova ny fantsom-baravarankely mena manjelanjelatra avy eo amin'ny garan-dalamby taloha ho lasa toeram-bahoaka misy toetra. Noho ny vavam-bava dia mitady ny efitrano fitsaharana ireo mpizaha tany ankehitriny, izay misy sarivongana, mozika ary sary hosodoko mampiseho taratry ny vanim-potoana genteel taloha kokoa tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Ireo orinasa eto an-toerana izao dia mahazo tombony amin'ireo mpandalo amin'ny alàlan'ny fijanonana mitsidika ireo trano fidiovana misy fomba taloha ao afovoan-tanàna.
Fanehoan-kevitry ny mpitsara: Ny fomba namoronan'ny vondrom-piarahamonina Cummins ilay trano efa nisy taloha hamerenany azy amin'ny fomba vaovao sy mahatsikaiky dia tena tsara. Ny toeram-pivoahana ho an'ny daholobe ao an-tanàna dia nanjary nahasarika mpizahatany ho azy manokana, izay mampiseho fisainana matsilo ataon'ny fiarahamonina eo an-toerana. Tsy toy ny fidirana sasany amin'ny loka, Cummins dia vitsy ny mpitsidika. Nahavita asa lehibe izy ireo noho izany nanangana fisarihana 'must-see' izay miteraka fidiram-bola ho an'ireo orinasa eo an-toerana.
Toerana tsara indrindra - Hotel La Jolla (A Curio Collection by Hilton), Shores Drive, La Jolla, Kalifornia, Etazonia. Mipetraka eo amin'ny rihana faha-11 ahatazana an'i La Jolla sy ny ranomasina, ny trano fidiovana dia manome fahitana manaitra ny tanàna amoron-tsiraka any La Jolla sy ny Oseana Pasifika any San Diego.
Fanehoan-kevitry ny mpitsara: Afaka mankafy fomba fijery mahavariana momba an'i La Jolla sy Pasifika ny mpitsidika avy ao amin'ny efitrano fitsaharana. Manoloana ny morontsiraka, ny varavarankely lehibe dia mamela hazavana voajanahary izay mameno ny lokon'ny tany voafehy ao amin'ny efitrano fidiovana. Ny fomba fijery avy amin'ny loo dia mampifandray ireo mpitsidika amin'ny toerana tsara tarehy manodidina azy ireo. Ny mpitsidika dia miaina fahitana mahafinaritra voandro amin'ny hazavan'ny ranomasina tsy miova.
Mendri-piderana koa ao amin'ny sokajy Toerana Tsara Indrindra ny loos miloko ao amin'ny zaridainan'ny Lupton Park any Maryborough, Queensland.
Toileta azo idirana tsara indrindra - Seranam-piaramanidina Brisbane, Queensland, Aostralia. Ny trano fidiovana Brisbane Airport nohavaozina dia natao hihoatra ny lalàna momba ny fidirana. Ny toerana fanovana natokana dia ahafahan'ny fitaovana manokana toy ny latabatra fanovana ho an'ny olon-dehibe, fananganana ary fidiovana misy lalamby azo esorina ho an'ireo olona manana fahasembanana lehibe. Ny endrika malalaka sy malefaka dia mahamety ny fivezivezena amin'ireo olona manana fahasembanana sy mpiambina an'arivony maro, izay maro no nosakanana tsy hanao dia lavitra. Ny fanaovana tatitra nomerika be pitsiny dia miantoka ny fahadiovana tsy tapaka. Ny seranam-piaramanidina Brisbane dia manana alika anaty trano mihitsy aza ho an'ny alika mpitari-dalana izay miara-dia amin'ireo olona manana fahasembanana.
Fanehoan-kevitry ny mpitsara: Nametraka fenitra vaovao ny loos azo idirana ao amin'ny seranam-piaramanidina Brisbane amin'ny alàlan'ny fahazoana mitsangatsangana. Ny fomba fiasan'izy ireo iray manontolo dia nanome hery ireo mpandeha manana fahasembanana ary nanamora kokoa ho azy ireo sy ireo mpikarakara azy ireo hamaly ny filan'izy ireo amin'ny fahamendrehana sy fiononana. Ny loos ho an'ny alika mpitari-dalana dia mampiseho ihany koa fa ny seranam-piaramanidina Brisbane dia miahy ary mandray fomba feno amin'ny fitsangatsanganana azo zahana.
Quirkiest Experience - Bowl Plaza, Lucas, Kansas, Etazonia. Bowl Plaza dia trano fidiovana ho an'ny daholobe misy bling! Ny trano fidiovana, izay naharitra efa-taona ny fanamboarana azy, dia manintona lehibe an'i Lucas, renivohitry ny zavakanto eny ifotony any Kansas. Ny rindrin'ny efitra fandroana dia rakotra anatiny sy ivelany miaraka amin'ny mozaika amin'ny antsipiriany noforonin'ireo mponina sy mpanakanto teo an-toerana. Ny tranobe iray manontolo dia miendrika tanky fidiovana. Ny fidirana dia noforonina toy ny rakotra fidiovana miakatra misy dabilio izay maneho ny seza fivoahana miolaka. Ny sisin-dàlana mankamin'ny loos dia mikoriana avy ao anaty horonan-taratasy fidiovana lehibe. Bowl Plaza dia malaza be ankehitriny amin'ny mponina sy ny mpizahatany ary manana ny fisoratam-bokiny.
Fanehoan-kevitry ny mpitsara: Ny trano fidiovana ho an'ny daholobe Bowl Plaza dia mampiseho ny fandraisan'anjaran'ny fiaraha-monina lehibe izay maneho ny lazan'ny olona tao an-tanànan'i Lucas ho toerana itadiavana zava-kanto ifotony. Ny rindrina dia rakotra porcelain, takelaka fahatsiarovana, sary mihetsika ho an'ny ankizy, fiara kilalao, sarontava tarehy ary effigies. Ny habakabaka iray manontolo dia alitara mampitsangam-bato amin'ny famoronana korontana. Tian'ny ankizy sy ny olon-dehibe izany. Manintona azy manokana izao ny Bowl Plaza.
Mendri-piderana koa ao amin'ny sokajy Quirkiest Experience ny lovia fidiovana ivelany any Dump Point any Trangie any amin'ny faritra Orana any New South Wales, Aostralia.
Mpandresy amin'ny ankapobeny sy mpandresy sokajy ho an'ny fandraisana anjara ankapobeny amin'ny fizahan-tany amin'ny Toilet - Ny James Bond Loos ao amin'ny Piz Gloria, Murren, Suisse. Miorina amin'ny 2970m eo an-tampon'ny Mt Schilthorn any Suisse, ny trano fisakafoanana sy ny foibe mpitsidika an'i Piz Gloria dia nandray ny lohahevitra James Bond hatramin'ny nampiasana ny toerana ho Blofeld's Lair nandritra ny horonantsary ny «On Her Majesty's Secret Service. Nohavaozina tamin'ity taona 2017 ity, izao dia misy vokany eo amin'ny audiovisual James Bond ny fivoahan'ny trano fidiovana: mipoitra eo amin'ny fitaratra ny tovovavy Bond Rigg rehefa misasa tanana ny lehilahy. Misy fambara ho an'ny lehilahy ao amin'ny trano fidiovana milaza hoe: "Akorohy, aza mikorontana" ary "Mikendry toa an'i James." Ny mozikan'ireo tovovavy dia misy mozika ary misy feom-basy miakatra rehefa miseho eo amin'ny fitaratra eo akaikin'ny lavaka bala ny sarin'i James Bond. Ao amin'ny trano fidiovana ho an'ny vehivavy dia misy rakipeo milaza an'i Bond manao hoe: “Anio alina, toerako - izahay roa ihany.”
Fanehoan-kevitry ny mpitsara: Ankoatry ny toerana mahafinaritra any Mt Schilthorn, ny trano fandroana James Bond dia antony mahafinaritra ihany koa izao. Ny trano fidiovana dia nanangana an'i James Bond ho velona mandrakizay ary nanampy singa mahatsikaiky mahatsikaiky amin'ny fitsangatsanganana amin'ny iray amin'ireo toerana manaitra indrindra any Eropa.
Mihaona amin'ireo mpamorona sy mpitsara ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany amin'ny kabine
Tamin'ny faha-2 taonany, ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany ho an'ny taona 2018 dia nahasarika fidirana 30 avy amin'ireo sokajy dimy avy amin'ny kaontinanta efatra. Ny fanendrena an-tserasera an-tserasera dia nisokatra nanomboka ny 14 Febroary hatramin'ny 1 Mey 2018.
Ny loka iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany ho an'ny Toilet 2018 dia noforonin'i Carolyn Childs sy Bronwyn White, mpiara-manorina ny MyTravelResearch.com. Carolyn sy Bronwyn dia nanao fikarohana tamina vondrona mifantoka amin'ny fiantraikan'ny trano fidiovana ho an'ny daholobe amin'ny toerana fizahan-tany.
Ny fitsarana dia notontosain'ny Mpitantana Tetikasa Clare Whelan ITTA ho an'ny MyTravelResearch.com, Ken Scott avy amin'ny ScottAsia Communications, Chris Flynn avy amin'ny Pacific Asia Travel Association, Bill Forrester of Travability, Chris Veitch (International Accessible Tourism Consultant), Mark Wilson of Wisdom (Design Mpanohana ny loka), Sue Hodges ao amin'ny SHP, Giovanna Lever avy ao amin'ny Sparrowly Group, Steve Rosa avy ao amin'ny South Highlands fizahan-tany (ITTA 2017 Mpandray anjara ara-toekarena tsara indrindra), Jodie Teaken avy any Qantas, ary Dick Teaken (filohan'ny mpitsara ary mpanoratra ny boky ho avy amin'ny trano fidiovana).
Loka: Ilay mpandresy tamin'ny ankapobeny (trano fidiovana misy lohahevitra James Bond ao amin'ny Piz Gloria, Murren, Suisse) dia hahazo fanomezana AU $ 2000 izay natolotra ho an'ny Andro manerantany ho an'ny World Toilet amin'ny anarany sy ny kopian'ny isaky ny famoahana fikarohana MyTravelResearch.com amin'ny taona 2018 (mitentina AU $ 8000) , ary ny fidirana amin'ny hetsika fikarohana fizahan-tany. Ireo mpandresy sokajy hafa dia hahazo izany, mihena ny fanomezana amin'ny Andro manerantany ho an'ny trano fidiovana.